Ngwa ụlọ Sauna China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ngwa ụlọ Sauna - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ngwa ụlọ Sauna)
Akụrụngwa ngwa ngwa ọkụ ọkụ
Akụrụngwa ngwa ngwa ọkụ ọkụ Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: 200 * 300mm, ahaziri dị elekere: 16w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị Max okpomọkụ: 42 ℃ agba: nwa, ahaziri oge ndu: ụbọchị 30 Nkọwapụta ngwaahịa Ngwá ọkụ anyị na-emepụta ihe bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị mma ma bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya...
PVC anụ ụlọ na-eti mkpu na PTC ọrụ
UL Rigara PVC anu ulo ndi na-egwu oku na oru PTC Nkọwapụta ngwaahịa Kedu ihe bụ PTC? Igwe ihe omimi nke oma (PTC) bu ihe omuma ohuru ohuru nke gbanwere ulo oru oku. A na-ekpo ọkụ ngwa ngwa, ya na usoro kpo oku nke na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha ma na-acha edo edo n'ofe dum. Ụzọ ọhụrụ nke kpo oku a na-adịgide adịgide...
Ihe na-ekpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ maka Nlekọta anụ ụlọ
Nkọwapụta ngwaahịa A na-ahazi Egwuregwu Na-ekpo ọkụ nke Onwe anyị maka anụ ụlọ na-ekpo ọkụ. Na-ekpo ọkụ n'ebe anụ ụlọ gị mara mma nọ n'oge oyi oyi. Ihe dị elu nke ihe ọkụkụ nwere ezigbo radiation.Par infrared radieshon nwere ike ịbanye n'ime miri gị n'ime ahụ anụ ahụ gị, ahụrụ mgbu ahụ ma kwalite...
ihe nkiri ọkụ sauna cedar
Ngwa ụlọ Sauna Ụlọ ihe nkiri Sauna Okpokoro Igwe Ọkụ Sauna Ngalaba Ugbo Ala Sauna Nnukwu anụ ụlọ na-egwu egwu Uwe Akpụkpọ anụ na EC Ụlọ ihe nkiri Sauna Room Ụlọ ihe nkiri Sauna na UL